သက်တန့်ချို: တိရိစ္ဆာန်များကိုBonsai အဖြစ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် key changeအဖြစ်ရောင်းချခြင်းအား ဆန့်ကျင်ကြပါစို့
တိရိစ္ဆာန်များကိုBonsai အဖြစ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် key changeအဖြစ်ရောင်းချခြင်းအား ဆန့်ကျင်ကြပါစို့
နောက်သတင်းတစ်ခုကတော့ ကြောင်ကလေးတွေကို ဘွန်ဆိုင်းအဖြစ် ပုလင်းတွေထဲမှာ ထည့်သွင်းရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ တရားဝင်လိုလိုပြုလုပ်ရောင်းချနေတဲ့ဆိုက်ကတော့ http://bonsaikitten.com/bnw.html ဖြစ်ပါတယ် ။ တချို့သတင်းဆိုက်တွေမှာ Hoax သတင်းမှားလို့ ဖော်ပြနေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ် ။
Maung Zaw Zaw April 28, 2014 at 10:56 AM
ကိုယ်​ချင်းစာတရားထားကြပါ သတ္တာဝါအမျိုးအစားထဲမှာ​တောင်​လူပါတယ်​ ကြီးနိုင်​ငယ်​ညှင်း​တော့မလုပ်​ကြပါရန်​​တောင်း
Pyone Cho April 28, 2014 at 3:10 PM
They are inhumanely people.
မိုးသက် April 28, 2014 at 5:20 PM
လူတွေရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုအတွက် တိရိစ္ဆာန်က အသက်နဲ့ရင်းရတယ် :(
Anonymous April 29, 2014 at 11:08 AM
Anonymous April 29, 2014 at 11:09 AM
သူကြီးမင်း April 29, 2014 at 11:51 PM
ပြုလုပ်ဖန်တီးသူ၊ ပျော်ရွှင်စွာ ၀ယ်ယူသုံးစွဲသူ။ အဲဒီလူတွေ တနေ့ကျရင် ထောင်ကျရင်ကျ မကျရင် ပန်းနာရင်ကြပ်နဲ့ ဘ၀နိဂုံးချုပ်မဲ့ သူတွေ ထင်ပါရဲ့။ ဖတ်တာနဲ့တင် အသက်ရှူကြပ်လာပြီ။
Hillary Chang May 1, 2014 at 2:11 PM
it's true and true. I don't agree it. Human being must have ethical.
Anonymous June 15, 2014 at 6:58 PM
ညီမလေးဖတ်ဖို့ (၁၂ )
တိရိစ္ဆာန်များကိုBonsai အဖြစ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် key ...
“ ကိုးကွယ်ရာကို စော်ကားကြပြန်ပြီ ”
Guizhou မှ မြည်းပု
MH370 ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးမှု အဖြေထွက်ပြီလား ( သို့...